केहि अनावश्यक कपाल संग केटी के बारे मा? यहाँ हेर्नुहोस्, तपाइँले के गर्नुपर्नेछ थाहा पाउनुहुनेछ! - उद्योग समाचार - शेन्जेन स्मार्ट स्मार्ट निर्माण प्रौद्योगिकी कम्पनी लिमिटेड
केहि अनावश्यक कपाल संग केटी के बारे मा? यहाँ हेर्नुहोस्, तपाईंलाई थाहा छ के गर्ने!
समय: 2020-05-20 हिट्स: 2
आउनुहोस् पहिले शरीरमा किन धेरै कपालहरू हुनुको कारणलाई हेरौं, तब हामी कसरी यसको सामना गर्ने भनेर जान्न सक्छौं!
शरीरको कपालको सामान्य कारणहरू आनुवांशिक कारक र शरीरमा उच्च एन्ड्रोजन स्तर हो।
यदि अभिभावकको शरीरको कपाल धेरै छ भने, जेनेटिक कारकका कारण केटीहरूमा यस्तो हुन सक्छ।
यदि केटीहरूमा अधिक एन्ड्रोजन स्राव छ भने, एन्ड्रोजनले केटीहरूको शरीरको कपाल बिस्तार बिस्तार बढाउँदै जान्छ। यदि केटी अधिक शरीर कपालको साथ जन्म भएको छ भने, यो आनुवंशिक कारकबाट प्रभावित मानिन्छ। यदि यौवनपश्चात् त्यहाँ धेरै कपालहरू छन् भने, यो शरीरमा अत्यधिक एन्ड्रोजन स्रावको कारण हुनुपर्दछ।
ठीक छ, हामी depilation को धेरै विधिहरु को बारे मा सिकौं!
१. शेभर शेभिंग
यो रेजर प्रयोग गर्ने सबैभन्दा सजिलो तरीका हो। कपाल हटाउन को लागी समय कहिले काँही आउँदैछ, र तयार गर्न को लागी समय छैन। यस समयमा, यो रेज़र छनौट गर्न धेरै ग्रिलहरूको विकल्प हो। अब त्यहाँ धेरै इलेक्ट्रिक शेभरहरू छन् जुन प्रयोग गर्न पनि धेरै सजिलो छ। तर केहि दिन पछि, कपाल फेरि बढ्नेछ, र शरीरको कपाल गाढा हुनेछ। यो केवल सात दिन सम्म रहन्छ। हामी किन शरीरको कपाल exubernt को सिद्धान्त जाँच्न सक्छौं, हामी बुझ्न सक्दछौं, यस समय, मूल कारण को लागी उपचारको एक विधि। त्यसकारण, यो समय बचत गर्न सजिलो विधिको रूपमा मात्र प्रयोग गर्न सकिन्छ, लामो-अवधि विकल्पको रूपमा होईन।
२. मोम निकासी
हनी मोमले कपाल छिटो हटाउन सक्छ, तर यो पनि धेरै घातक नुकसान हो। यो प्रयोग गर्दा ठूलो पीडा सहनु पर्छ। डिप्रिलेसन चरणहरू निम्नानुसार छन्: पहिले, कपालको बृद्धिको दिशामा मैनलाई लागू गर्नुहोस्, गोज कभर गर्नुहोस्, र त्यसपछि मोम जमिन पछि गोईज छेड्नुहोस्। यो विधि फराकिलो कपाल हटाउन व्यापक रूपमा प्रयोग गरीन्छ। रखरखाव प्रभाव व्यक्तिको कपालको विकास र चयापचय गतिमा निर्भर गर्दछ, सामान्यतया १-२ महिनासम्म कायम राख्न सकिन्छ। नाजुक छाला भएका र पीडाबाट डराउने केटीहरूलाई यो विधि सिफारिश गरिदैन। अवश्य पनि, हामी यो पनि बुझ्न सक्दछौं कि यो पनि एक विधि हो जुन स्थायी रूपमा कपाल हटाउन सक्दैन। के अनावश्यक कपाल भएका केटीहरू के गर्छन्? यहाँ हेर्नुहोस्, तपाईंलाई थाहा छ
Twe. ट्वीजरको साथ टाढा:
एक एक गरी कपाल तान्न भौं पलक प्रयोग गर्नुहोस्। यसले लामो समय लिन्छ र यो धेरै पीडादायी छ। यो सामान्यतया अनुहारको कपाल र भौहिको लागि लागू हुन्छ। यो ठूलो क्षेत्र depilation को लागी उपयुक्त छैन।
Dep. डिपिलेशन क्रीम प्रयोग गर्नुहोस्
डिपिलेशन क्रीम डिप्लिशन सिद्धान्त हो, डिपिलेशन क्रीम त्यहाँ त्यस्तै तत्वहरू छन्, कपाललाई भंग गर्न सक्दछन्। Ila--5० मिनेट जति नै, छालामा डिपिलेशन क्रीम लागू गर्नुहोस्, डिप्लिसन क्रीम र कपाल सँगै काट्नको लागि स्टिक र अन्य उपकरणहरू प्रयोग गर्नुहोस्। फाइदा यो हो कि यस विधिमा कुनै स्पष्ट पीडा छैन। बेफाइदा: पहिलो घनी कपालका लागि उपयुक्त छैन, दोस्रो छालाको संवेदनशीलता पैदा गर्न सजिलो छ, र कमजोर छाला बाधा भएका केटीहरूले यस कपालको छनौट नगर्न कोशिस गर्छन्, यदि तपाईं यसलाई प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईं स्थानीय परीक्षण विचार गर्न सक्नुहुन्छ।
घरका लागि IP.IPL कपाल हटाउने उपकरण
हालसालैका वर्षहरूमा यो तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित विधि हो। सिद्धान्त केशको फोलिकल नष्ट गर्नु हो ताकि कपाल बढ्न सक्दैनन्। प्रयोग गर्नका लागि क्षेत्रमा कपाल दाढी गर्नुहोस्, छालामा लक्षित गर्न उपकरणको प्रयोग गर्नुहोस्, नाडी प्रकाश निकाल्नुहोस्, र कपालको फ्याक्सिकललाई हानी गर्नुहोस्। उत्पादनहरू सामान्यतया आँखाहरू जोगाउन चश्मा लगाएर सुसज्जित हुन्छन्। यो विधि अरू भन्दा उच्च छ। पहिलो भनेको केशको फोलिकल नष्ट गर्नु हो, जसले स्थायी कपाल हटाउने प्रभाव प्राप्त गर्न सक्छ। अपरेशन धेरै सरल र सुरक्षित छ। तेस्रो, यसले कम समय खर्च गर्दछ र months महिना प्रयोग पछि स्थायी depilation प्राप्त गर्न सक्छ। वर्तमानमा, घरको कपाल हटाउने लागत अधिक छैन। यस जस्तो डिपिलेटरको लागत केहि सय टुक्राहरू हुन्छन्।
निष्कर्ष: सबै भन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको उपयुक्त र सुविधाजनक अपांग विधिहरू छनौट गर्नु हो। होम आईपीएल कपाल हटाउने जीवन को एक धेरै सुविधा ल्याउँछ, र कपाल हटाउन को बारे मा चिन्ता को आवश्यकता छैन।
वैज्ञानिक र टेक्नोलोजिकल साधनहरूको प्रयोग गरेर खुशी जीवन बनाउनु सामाजिक विकासको महत्त्व हो र वैज्ञानिक र प्राविधिक नवीनता। माथिको मेरो सारांश छ। म आशा गर्छु कि यसले तपाईलाई मद्दत गर्न सक्छ।
अघिल्लो: गर्मि आउदै छ। कपाल हटाउने र स्किनकेयरको बारेमा तपाईंलाई कति थाहा छ?
अर्को: के लेजर कपाल हटाउने उपकरण हानिकारक छ?